Ny fomba fitafy akanjo amin'ny kiraro - fanatanjahan-tena sy fako, lava, midi sy mini, akanjo sy denim, akanjo lava sy akanjo
Miakanjo amin'ny mpitsikilo - inona no holazain'ireo stylists?
Ny fomba fiaina matanjaka sy mavitrika eo amin'ny lamaody maoderina ankehitriny dia mitaky fahafaha-manao sy fahatokisana amin'ny fampifangaroana ny poketra. Na izany aza dia zava-dehibe ny mijanona ho an'ny vehivavy sy ny refinady mba hanamafisana ny halavany sy ny fahalemen'ny ivelany. Iray amin'ireo vahaolana maoderina sy mahomby amin'ny fampifangaroana ireo toetra rehetra ireo ny akanjo amin'ny tennis.
Combina - akanjo sy tennis
Ny antontan'akanjo akanjo am-pitiavana sy kiraro kezhualnoy - tsy vaovao amin'ny fomba maoderina. Ity fanapahan-kevitra ity dia nandalo ny dingana rehetra tao amin'ny stylistics - avy amin'ny tawdry mauve ka hatramin'ny fironana modely. Taorian'ny vanim-potoana vitsivitsy lasa izay, ny mpanakanto dia nieritreritra fa tsy azo atao izany. Hatramin'izao dia heverina ho lahatenim-pahaizana ny fanontaniana momba ny fomba fanaovana akanjo amin'ny kiraro. Ny mpanamboatra dia manandrana fomba amam-panao, akanjo sy kiraro. Ny arabe na fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena matetika dia manampy amin'ny fandraharahana, kezhualnye, amam-pitiavana ary eny ny fampakaram-bady mihitsy aza.
Karazan'akanjo - akanjo sy sneakers
Amin'ny vanim-potoana vaovao, ireo mpanakanto dia somary nanamaivana ny habetsaky ny zana-tsokajy ho an'ny akanjon'ny akanjom-behivavy sy ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena. Ity vahaolana ity dia ahafahanao mamorona tsipika mahazendana, mahazatra ary mahaliana. Ny safidy ny modely amin'ny akanjo dia nanjary samihafa kokoa. Ny Classics dia mitafy akanjo vita amin'ny satroka miaraka amin'ny sneakers 2017, fa ny tsipìka amam-bika malaza sy malefaka, mahazatra marevaka, ary koa ny famoronana rehetra amin'ny famokarana vokatra. Ary mba ahafahana mifanaraka amin'ny sarinao amin'ny lohahevitra farany, dia mendrika ny handinika fitsipika marobe amin'ny famoronana azy io:
Sary maromaro mitambatra . Ny tena zava-dehibe dia ny fifanoratana ny fizaran-taona eo amin'ny famolavolana, na ny ampahany ambony sy ny fanatontosana. Ny akanjo marevaka sy malefaka dia tsara indrindra amin'ny kiraro misokatra vita amin'ny fitaovana tsara, ny demi-sezon sy ny akanjo amin'ny ririnina dia tokony hifanaraka amin'ireo modely ambony sy mafana.
Loko mifangaro . Ilaina ny mandray an-tanana ny fanangonana garony. Tsy ireo modely goavana ihany no tokony hifanandrify, fa koa ny famolavolana printy sy ny fanoratana.
Universal classic . Ny fandresena amin'ny safidy iray dia ho fotsy na fotsy mainty. Ny singa toy izany dia mifanentana amin'ny olona iray.
Fahafatesan'ny taonany . Ao amin'ireo fampisehoana farany, ireo teknisiana dia manizingizina ny sombin-tsarin'ny vehivavy iray mitafy keshural ho an'ny tanora. Ny vehivavy ao anatin'ny vanim-potoany dia tokony handao ny tsikombakomba toy izany.
Inona ny akanjo azoko entina amin'ny kiraro?
Ny olana lehibe amin'ny famoronana tsipìka tsara tarehy sy mahomby dia ny safidy amin'ny fomba fitafiana. Raha ny marina, tamin'ity taona ity ireo mpanamboatra dia nanolotra fanatsarana ny fanavaozana tamin'ny taon-dasa sy ny fivoaran-tsariny tamin'ny herintaona. Andeha hojerentsika ny akanjo anaovan'ny kibay androany:
Tranompokonona . Ny malaza indrindra dia modely amin'ny fitaovana elastika sy mampiadana. Ity vahaolana ity dia manan-danja amin'ny karazana fisehoana rehetra sy amin'ny halavany.
Ny fiposahan'ny masoandro . Ny akanjo lamaody indrindra ho an'ny mpitaingin-tsoavin'ity fizaran-taona ity dia karazan'akanjo mitaingina. Amin'ny lamaody sy ny vokatra fohy, ary ny fomba amam-panafintanina klasika amin'ny lohalika.
Sarafan . Ny famotehana tsotra amin'ny harona dia vahaolana tsara indrindra amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra. Sarafan dia manamafy tanteraka ny fanatsarana, ny fahazavana ary ny hakantony amin'ny sary.
Style sweater . Ny safidy tena izy amin'ny vanim-potoana mangatsiaka dia vokatra mahazendana miaraka amin'ny tendrontany ambony, sambon-kisoa, na voankazo tsara tarehy.
Fanatanjahan-tena amin'ny akamaly
Nisy safidy nandrasana foana izay heverina ho tsipìka amin'ny fomba iray. Mandritra izany fotoana izany, ny akanjo fanatanjahantena ho an'ny tennis dia tsy dia misy fahasamihafana noho ny fanao andavanandro na amam-pitiavana. Ny fahombiazana sy mahametimety indrindra dia ny modely amin'ny tennis miaraka amin'ny tendron-tery ambony, satroka kiraro ary tavy ambany. Ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena dia hameno tsara sy hanapaka tsara ny T-shirt na T-shirt. Ny famafana ny trapezoïde sy ny silhouettes dia ho kofehy kokoa ¾. Ary ny modely modely amin'ny polo dia hanantitrantitra ny fahatokisana sy ny fahamarinan'ny tompony.
Lamina lava amin'ny tennis
Ny singa fototra amin'ny fisafidianana ny karazan-teny ao amin'ny gorodona dia ny fahamaizinana sy ny fiompiana. Ny endriky ny akanjo miaraka amin'ny tennis dia mandinika ny sisiny mivantana sy malalaka. Ho an'ny modely lava, dia tsy mahafa-po ny fehikibo amin'ny fantson-drano izany, mandondona eo amin'ny sisin'ny akanjom-boninahitra, manapaka avo amin'ny sisiny. Mba hanamafisana ny fahamendrehana sy ny firindrana, dia ilaina ny mitoetra ao amin'ny tendan'akondro. Amin'ity tranga ity, ny tendron-tsoratra dia mety ho maivana sy maimaim-poana.
Jeans mitafy tennis
Safidy tsara hafa koa ny akanjo fitafy. Safidy manerana izao tontolo izao izany. Ny akanjo marevaka miaraka amin'ny tennis dia aseho sarafana sy trapezoids maivana, matetika ampiana amin'ny soroka tsy misy, volon'ondry eo amin'ny sisin'ny tendany na hem. Ho an'ny vanim-potoana sy ny vanim-potoana mangatsiaka, dia mora kokoa ny modely avy amin'ny lahatsoratra matanjaka. Eto ny fisafidianana ny fohy dia mety ho maivana ary afaka maimaim-poana. Ny endriky ny endriky ny lamaody maoderina dia mamirapiratra mamirapiratra. Aretina maivana na maivana, fanasan-damba, varenka ary akanjo mihaja - endrey mahazatra, mifanaraka tsara amin'ny kiraro fanatanjahan-tena.
Mofomamy miaraka amin'ny kiraro
Sexy silhouette tsara tarehy, izay manasongadina ny fomba fatorana matevina amin'ny lohalika na ny ombidia ombidia, dia mijery tsara amin'ny kiraro mahazatra sy mahazatra . Ity fanapahan-kevitra ity dia manan-danja manokana tsy ho an'ny vanim-potoan'ny vanim-potoana, fa koa amin'ny vanim-potoana mafana. Ny akanjo marevaka amin'ny kiraro amin'ny fahavaratra dia aseho amin'ny akanjo fohy-T-shirt, tadin'ny lamosina, famolavolana misokatra. Tena ilaina ny fitaovana. Ny vokatra hafakely dia vita amin'ny kofehy matevina na mifangaro amin'ny landihazo elastan. Ny safidy mora dia mifototra amin'ny rivotra mifoka rivotra sy marefo ary hafa.
Dress-shirt miaraka amin'ny tennis
Ny vahaolana tsara indrindra, mifanaraka amin'ny endrika, na amin'ny akanjo sy kiraro, dia heverina ho fomba mahazatra sy maivana amin'ny bokotra. Ity garderie ity dia aseho, angamba, ny karazany indrindra. Ny fototra ara-panatanjahan-tena dia hameno tsara tanteraka ny modely fohy sy lava. Amin'ny lamaody, sary miaraka amin'ny silhouettes maimaim-poana sy malalaka, modely lahy ary fitondran-tenan'ny vehivavy. Mba hampitony ny fitiavana sy ny fitiavan-tanindrazana, dia ilaina ny mampifangaro ny kiraro amin'ny vehivavy miaraka amin'ny akanjo miloko marevaka na fantsona mangarahara, jiro mametaka, loko pastel.
Dress-case amin'ny sneakers
Ny tena mampientam-po, saingy tsy dia mahaliana loatra ny ampahany amin'ny akozual kezhual sy ny fomba hentitra. Ny duet iray toy izany no tsara indrindra maneho ny mety hisian'ny fanandramana amin'ny fomba maoderina. Ny mpanamboatra manolotra akanjo fohy sy midi amin'ny sigara. Ny fehin-kiran'ny akanjo tsy mahazatra dia tsy mandà ny fisian'ny fanorenana - Basques, firavaka sandoka, kofehy manga sy skirt asymmetrika . Ny singa manan-danja amin'ny tsipìka toy izany dia ny fanarahan-dalàna ny laconisme sy ny famerenana. Aza misafidy loko marevaka marevaka sy lamaody.
Maivana be amin'ny tennis
Ny akanjo am-pahombiazana sy haingon-trano eo amin'ny làlana an-dalambe dia manara-maso ny modely amin'ny famoahana malalaka sy tsy misy endrika. Amin'ity tranga ity, ny tena mety indrindra dia karazam-pandehanana tsotra miaraka amin'ny halavan'ny mini na midi. Ny ensemble malaza amin'ny fahavaratra dia akanjo lava be sy kiraro avo. Ny fandroahana dia aseho ho tsy mikatona, ary ny lavaka mangatsiaka - amin'ny lela, amin'ny soroka iray, miaraka amin'ny satroka asymmetrika.
Dressing mini miaraka amin'ny tennis
Ireo tompon'ireo mpanofana tongotra marefo dia nanoro hevitra ny tsy hanafina ny fahamendrehany eo ambany elany. Ny modelim-bolo minitra fohy dia hanintona ny sain'ny hafa foana, hanamafy ny hafanana sy ny halaviran'ny endrika. Ny ankizivavy iray amin'ny akanjo sy ny mpitaingina dia manantitrantitra ny fahaizany mamaky teny mamorona sary maoderina. Raha ny tena izy, amin'ny ankapobeny ny kiraro fohy sy kiraro fanatanjahan-tena, ny endri-javatra toy ny azo ampiharina sy ny fahatokisana dia tonga any an-tsainy, fa miaraka amin'ny fanatsarana sy ny firaisana ara-nofo ihany koa . Amin'ny lamosin'ny lobaka mivaingan'ny masoandro sy ny masoandro mamirapiratra, mihorohoro sy mitranga be dia be.
Akanjo hariva amin'ny kiraro
Ny fananganana sary amin'ny akanjom-behivavy sy fanatanjahan-tena ao amin'ny Kazhual dia tsy misy mahagaga intsony. Noho izany dia mandeha ny ankamaroan'ny vehivavy lamaody izay mandany fotoana betsaka amin'ny tongony, mitarika fiainana mavitrika sy mahery. Na izany aza, raha te handresy ny hafa amin'ny famoronana anao sy ny tsy fahampian-tsakafo ianao, dia manaova akanjo maotina tsara tarehy sy kanto amin'ny kiraro mahazatra. Mba hifanaraka amin'ny fironana farany, mandinika ireto hevitra ireto:
Lalina mitafy amin'ny sneakers . Ny fahamendrehana sy ny lolom-po amin'ny fitaovana misokatra dia mahaliana sy miavaka miaraka amin'ny tsy fahampiana sy ny fahatsoran'ny kiraro. Ho an'ny tsipìka kanto, ny akanjom-pirahalahiana ankapobeny na style retro miaraka amin'ny akanjom-bolo manidina, manana endrika silhouette sy jirobe fanamafisam-peo dia mety.
Keds eo ambany akanjo tulle . Ny fametrahana ireo vokatra azo avy amin'ny tsena amin'ny fandefasana an-dalambe dia nirongatra, raha ny toeran'ny lazam-pifanandrinana dia nipoitra ny moron-tulle. Io fironana io dia miorina mafy amin'ny fomba maoderina amin'ny hariva amin'ny akanjo tsara tarehy.
Fitaovana fampakaram-bady . Ny mason-koditra sy ny fanadiovana dia nikasika sy ny tsipìkany marina ho an'ny ampakarina. Amin'ity tranga ity, ny safidy mety dia ny akanjo maotina fohy sy fohy.
Ny endrika mampihetsi-po amin'ny akanjo
Sary fampakaram-bady ririnina
Style glam rock amin'ny akanjo
Famoronana fanavotana amin'ny akanjo
Ahoana ny fomba fitondrana polo?
Sarinà sary amin'ny milina
Kofehy ho an'ny akanjo volom-borona
Fangatahana amin'ny orinasan-taona
Cone ao amin'ny vagina
Sotro kafe broccoli miaraka amin'ny menaka
Fanatanjahantena baolina kitra
Sakafo ho an'ny shavermi
Inona no azoko anaovana fampakaram-bady?
Nahoana no malahelo ny manao firaisana?
Ralph Lauren dia hamorona sary ho an'ny Melania Trump ho an'ny herinandro fanokanana
Inona no nofinofin'ny hena?
Fikajiana amin'ny ririnina
Mofo tsy misy menaka
Ahoana ny fomba hanadiovana ny sofin'ireo kisoa?
Mofomamy amin'ny mikraoba - mahavariana sy haingana ny fomba famokarana
Aretina amin'ny tsinay - soritr'aretina
Kolontsaina - Spring-Summer 2014